Izinqolobane ZaseMyron Ebell - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Ungayikhiphi Kanjani Ixhaphozi
Posted on November 14, 2016 by UGary Ruskin
Abafana kuma-C-suites baqinisekile ukuthi kumele bahleke namuhla. Badonse okusheshayo emphakathini waseMelika.
njengoba ishadi lokuhlala kugcwalisa ukuphatha kukaTrump okungenayo, kuyacaca ukuthi iTeam Trump ifuna "khipha inhlanzi”EWashington ngokubeka abaphathi bamaxhaphozi ezinkampanini.
Isikhathi sephathi sabantu abakhulu abasebenza ngaphansi kwesizwe sethu.
UJeffrey Eisenach, osebenze njengomxhumanisi we- IVerizon nenhlangano yayo yezohweboUsebenzisa inguquko yeCCC, futhi kungenzeka asebenzise okuthunyelwe kwakhe ku- inkululeko eviscerate ye-Intanethi futhi ngcwaba ukungathathi hlangothi kweNet.
Njengoba ubhubhane lwesizwe sethu lokukhuluphala luqhubeka, yini engaba yimbi kunokufaka i- i-lobbyist yeNhlangano Yeziphuzo zaseMelika, UMichael Torrey, ukuhola iqembu likaTrump loMnyango Wezolimo wase-US. Ungalokothi ukhumbule i- Abantu baseMelika abangama-25,000 abafa unyaka nonyaka ngenxa yokusetshenziswa ngokweqile kweziphuzo ezinoshukela.
Ukuguquguquka kwesimo sezulu okuvelele UMyron Ebell, umqondisi we Isikhungo Samandla Nezemvelo eqenjini eliphambili lenkampani Ukuncintisana Kwebhizinisi Isikhungo, uhola ithimba lezinguquko likaTrump, ukushaywa ngempama ebusweni kubo bonke abantu baseMelika abanganaki ukuguquka kwesimo sezulu, umoya ongcolile namanzi anobuthi.
Ababili abaphumelele kakhulu kuzoba osozimboni bezimboni uCharles noDavid Koch, kanye nefemu yabo Ama-Koch Industries. Okungenani ababili babaxhasi babo banezindawo ezivelele ekuguqukeni kukaTrump.
UMike Catanzaro, ocelela i-US Chamber of Commerce, i-American Chemistry Council ne-Koch Industries, ukuthi kube yisihlonipho sikaTrump “ukuzimela kwamandla”I-ajenda.
UMike McKenna, ophethe ushintsho eMnyangweni Wezamandla, ama-lobbies eDow Chemical naseKoch Industries.
Akungabazeki ukuthi ama-lobbyists weThimba leTrump asebenza ngokuthi angazilimaza kanjani izilawuli ezibalulekile, ngokwesibonelo, ukufeza isithembiso sikaTrump sokucekela phansi “Amaphoyisa Okudla e-FDA, ”Okulindeleke ukuthi kugcine uhlelo lwesizwe sakithi lokudla luphephile kubo bonke abantu baseMelika. Zama ukukutshela lokho oyedwa kwabayisithupha baseMelika abathola ubuthi bokudla unyaka nonyaka.
Ngokusho kweminye imithombo yezindaba, usomabhizinisi ongusomabhizinisi uPeter Thiel, uyi ukujoyina iqembu lezinguquko likaTrump. UThiel ungomunye wabasunguli be- Ubuchwepheshe be-Palantir, ebibambe iqhaza elikhulu ku ubunhloli bezinkampani ihlazo elibandakanya I-US Chamber of Commerce ihlela ukuphenya ngezinyunyana namaqembu ezakhamizi.
Isithembiso sikaTrump ku “qeda inkohlakalo yethu kuhulumeni”Ngokubeka abaphathi bezinkampani ezinkampanini kuyahlekisa. Njengombono we ukunika amandla uNewt Gingrich, owashiya iCongress enerekhodi lokudelela umthetho neMithetho yeNdlu mayelana nokuziphatha nenkohlakalo, ngemuva kokuphoqeleka ukuthi akhokhe i- $ 300,000 inhlawulo ngenxa yokona kwakhe ebandla.
Yebo, kungenzeka ukuba Hillary Clinton ubengeyena umngani omkhulu wabathengi, ezempilo yomphakathi noma abaqaphi bakahulumeni. UClinton unesimo esihle sokuthatha izinkampani nezinhlangano zabasebenzi ezimkhokhele imali yokukhuluma ngamammoth wagcwalisa isikhwama sakhe sesisekelo. Ukunqoba kwakhe bekungeke kulethe ukunyakaza kwezakhamizi emandleni, njengoba nokwakwenziwe ngumyeni wakhe.
Umbuzo owodwa ovulekile: Abavoti bakaTrump bazophendula kanjani - esikhundleni sokukhipha ixhaphozi - ukubeka ixhaphozi ekuphathweni kwexhaphozi?
Abavoti bakaTrump kufanele bahlanye - basanda kuthengiswa.
UGary Ruskin ungomunye wabaphathi be- I-US Ilungelo Lokwazi, iqembu elibheka imboni yezokudla. Kwaphela iminyaka eyi-14, waqondisa i-Congressional Accountability Project, eyayiphikisana nenkohlakalo eCongress. Ungamlandela ku-Twitter ku @syabongampungos.
Lo mbhalo ushicilelwe okokuqala ngo The Hill.
Ukudla Okucatshangwayo, Ukukhangisa I-American Beverage Association, I-American Chemistry Council, Isikhungo Samandla Nezemvelo, UCharles Koch, Ukuncintisana Kwebhizinisi Isikhungo, UDavid Koch, IDow Chemical, Hillary Clinton, UJeffrey Eisenach, Ama-Koch Industries, UMichael Torrey, UMike Catanzaro, UMike McKenna, UMyron Ebell, I-Newt Gingrich, Ubuchwepheshe be-Palantir, UPeter Thiel, US Chamber of Commerce, Verizon